बेसारे कृषिनीतिको प्रभाव : बेसारको आयातमा करिब १९१ प्रतिशत वृद्धि - बेसारे कृषिनीतिको प्रभाव : बेसारको आयातमा करिब १९१ प्रतिशत वृद्धि
२०७५, ३ पुष, 08:49:20 PM
काठमाडौं । मुलुकका पहाडी तथा तराई भेगमा उत्पादनको प्रशस्त संभावना हुँदाहुँदैपनि मुलुक बेसारजस्तो आधारभूत मसलामा पनि परनिर्भर हुँदै गएको छ । भन्सार विभागबाट हालै प्रकाशित तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक २०७५/७६ को प्रथम चार महिनामा बेसारको आयात मात्र रु. ७ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ ।
यो आँकडा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १९१ प्रतिशतले बढी हो । यही प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षमा बेसारको आयात मात्र रु. २२ करोड जति हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बेसारको आयातपनि भारतसहित मलेशिया, चीन, म्यानमारजस्ता देशहरुबाट समेत हुन थालेको छ ।
विदेशबाट भारीमात्रामा बेसार आउँदापनि देशभित्र बेसारमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने र नेपाली कृषकका उत्पादनहरुलाई कसरी विदेशी बेसारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा कुनै सोच छैन कृषिसँग सरकारी निकायहरुसँग । ए हो र ! लौ जा !! यस्तो पनि रहेछ है !!! भन्दै बेसारको बारेमा कुरा गर्नपनि ईच्छुक देखिंदैन कृषि मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीहरु ।
सारमा भन्नुपर्दा बेसार क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ र यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग एकाकार गर्नुपर्छ भन्ने कुनै योजना नै छैन सरकारसँग । यसैको परिणाम हो, मलेशिया, चीन र म्यानमारबाट समेत बेसार आयात हुनु ।
मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह, सबै सूचकाङ्क निराशातर्फ
आयातमुखी अर्थतन्त्र :- नौ महिनामा व्यापारघाटा २२ प्रतिशतले बृद्धि